Ihe ncheta dị mkpa nke Spain: Site na Alhambra ruo Segorian Alcazar | Njem akụkọ
Louis Martinez | 14/05/2022 17:00 | omenala, España
agwa gi okwu ihe ncheta dị mkpa nke Spain ọ na-eche na ọ ga-eme mgbalị nke nkenke na nhazi. N'ihi na obodo anyị nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme nke rụpụtara ihe dị ịrịba ama na nnukwu ihe nketa na nka.
Ndị Gris, ndị Rom, ndị Visigoth, ndị Arab na ndị ọzọ si na Iberian Peninsula gafere. Ha niile ahapụla ihe nketa dị mkpa n'ụdị ụlọ na omenala. Site na Asturias elu Andalusia ma site na Extremadura elu Aragon, isi obodo anọ nke obodo anyị nwere ụlọ kwesịrị ka ị bịa na nke so na ndị njem nleta si n'akụkụ ụwa dum na-agakarị. Ma, n'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-egosi gị nhọrọ nke ihe ncheta dị mkpa na Spain.
1 Alhambra nke Granada
2 Ezinụlọ Dị Nsọ
3 Katidral ndị dị mkpa n'etiti ihe ncheta dị mkpa nke Spain
4 Mosquelọ alakụba Cordoba
5 Alcázar de Segovia, ebe ewusiri ike n'etiti ihe ncheta dị mkpa nke Spain
Alhambra nke Granada
Ogige nke ọdụm, na Alhambra na Granada
Summit ọrụ nke Andalusian architecture, Alhambra abụghị ihe ncheta, ma otu n'ime ha. N'okpuru aha a gụnyere nnukwu ụlọ ndị Arab, ogige mara mma, ụlọ ochie ochie na ọbụna ebe obibi ndị mọnk mechara ghọọ ụlọ ndị njem nleta.
Ị nwere ike ịnweta ogige ahụ site na ọtụtụ ọnụ ụzọ. N'ime ha, nke ogwe aka, ikpe ziri ezi, mmanya, okpukpu asaa ma ọ bụ Arrabal. N'aka nke ọzọ, na nnukwu ụlọ Ụlọ elu nke Homenaje na Vela. Mana ebe nnukwu ihe ịtụnanya na-echere gị bụ na Medina. E nwere obí eze nke abụọ pụtara n'etiti ha. Nke sitere na Comares e wuru gburugburu Patio de los Arrayane na narị afọ nke XNUMX, mgbe ọdum e wuru ya gburugburu ogige a na-akpọ aha.
Ị nwekwara ike ịhụ oku a Mexuar, ọnụ ụlọ ndị a na-enye ikpe ziri ezi yana, na mpaghara Partal, nke fọdụrụ n'obí ndị ọzọ ochie. N'aka nke ọzọ, na aha Ụlọ nke Emperor otu ọnụ ụlọ wuru n'oge Carlos m. Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya, ha ga-adaba n'ọrụ mgbe ndị eze a kara aka eze.
Ọ dịkwa mkpa na Alhambra ịgafe na ije nke ụlọ elu, nke, dị ka aha ya na-egosi, na-ewega gị ịhụ Los Picos, la Cautiva, las Infantas na del Agua. Ma ọzọ akwa ọla nke a monumental mgbagwoju bụ Izugbe. Ọ bụ ụlọ ime obodo nke ubi ịchọ mma na ubi mkpụrụ osisi ndị eze Granada na-eji dị ka ebe obibi gbara ya gburugburu. Ọ malitekwara na narị afọ nke XNUMX na, gburugburu ya, ị nwekwara ike ịhụ ihe owuwu ndị ọzọ sitere na oge Nasrid. N'ime ha, ndị Moor oche, na ọdọ mmiri gbajiri agbaji ma ọ bụ foduru nke Dar-al-Arusa Palace.
Ezinụlọ Dị Nsọ
Sagrada Familia, otu n'ime ihe ncheta dị mkpa nke Spain
Ihe owuwu okpukpe a na Barcelona bụ ọrụ onye amamihe nke Antonio gaudi. Ma ọ bụkwa ihe atụ na nnukwu ọrụ nwere ike iji ụdị onwe nke jupụtara n'echiche efu. N'uju aha ya bụ Templelọ nsọ nke Ezinụlọ Dị Nsọ na onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Catalan pụrụ iche malitere iwu ya na 1882.
N'ụzọ dị ịtụnanya, a rụchabeghị ya, mana ọ bụ otu n'ime ihe ncheta ndị a kacha eleta na Spain. Ọ na-egosipụta ihe plenitude nke Gaudí na kasị mma exponent nke Ihe owuwu nke modernist Catalan. N'ezie, ọ na-ahazi nke ọma ụdị niile ọ mepụtara ruo mgbe ahụ. N'etiti ndị a, neogothic, the naturalist ma ọ bụ geometric.
Templelọ nsọ ahụ nwere atụmatụ obe Latin nwere nnukwu ụgbọ mmiri etiti ise yana transept nke atọ. O nwekwara apse nwere ụlọ ụka asaa. N'èzí, ọ nwere facade atọ, raara onwe ya nye ruo n'amụma, Ochichi na otuto nke Jizọs. N'otu aka ahụ, mgbe emechara ya, ọ ga-enwe ngụkọta nke ụlọ elu iri na asatọ, nke etiti etiti ga-apụta, na-ejedebe na dome ma tụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị mita na iri asaa na ise n'ịdị elu.
Banyere ime ya, Sagrada Familia dịkwa mma. Ọkachamara Gaudí kere oghere organic na yiri oké ọhịa, na ogidi ndị dị n'ụdị ogwe osisi. Maka akụkụ nke ha, oghere ndị ahụ nwere ọdịdị hyperboloid na windo na-ekesa n'ụzọ ga-eme ka ọkụ kwekọọ na nro dị nro banye. N'otu aka ahụ, ihe niile dị n'ụlọ nsọ nwere ihe atụ uru na Gaudí ọbụna lekọtara na-emebe ji achọ ọcha. Nke a bụ ihe gbasara pulpits, confessionals ma ọ bụ lecterns.
Na nkenke, Sagrada Familia bụ ihe ịtụnanya n'ihi nnukwu Antonio Gaudí. Àgwà ya pụrụ iche na ịdị ebube ya na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ncheta dị mkpa na Spain.
Katidral ndị dị mkpa n'etiti ihe ncheta dị mkpa nke Spain
Enwere ọtụtụ katidral dị egwu na Spain na anyị achọghị ịgwa gị maka otu, mana ọtụtụ. Ikekwe nke kacha eleta bụ nke dị na Seville n'ihi ọtụtụ ihe, na mgbakwunye na ọdịdị ya dị egwu. N'ime ha, ọ bụ otu n'ime katidral Gothic kasị ukwuu n'ụwa. Ma, eleghị anya, ọ na-emetụtakwa eziokwu nke inwe ewu ewu Giralda. Minaret nke oge Arab a bụ nke ụlọ alakụba ochie nke narị afọ nke XNUMX, e jikwa ya mee ụlọ elu mgbịrịgba maka ụlọ nsọ ahụ. A na-echekwakwa ihe dị oké ọnụ ahịa site n'oge ahụ Ogige nke osisi oroma.
Ọzọkwa, a na-eleta ya nke ukwuu Katidral nke Santiago nke Compostela, ma n'ihi ịbụ ebe njem ala nsọ na maka ịbụ ọla Romanesque. Ọ bụ ụdị nke kachasị na-ewu ụlọ, ma ọ na-enyekwa Gothic, Renaissance, Baroque na ọbụna ihe ndị Neoclassical. ebube dị ka Obradoiro facade ma ọ bụ Portico nke ebube mee katidral a bụrụ ọrụ pụrụ iche.
Ma anyị enweghị ike ichefu banyere Burgos katidral, ya na ụdị Gothic French ya kachasị. E mechakwara megharịa ya. Ma ọ bụrụ na ọ na-adọrọ mmasị n'èzí, ọ dịghị obere ka ọ dị n'ime. Ọ nwere ezigbo ọkpụrụkpụ na ihe ịchọ mma dị ka nke Akwa stair, nke Gothic ebe ịchụàjà nke Gil de Siloé ma ọ bụ ọtụtụ ili n'etiti nke pụtara na cid. N'otu aka ahụ, mbụ bụ ijiji, ihe arụrụ arụ nke na-emeghe ọnụ ya mgbe ụda chimes na-ada.
Anyị nwere ike ịgwa gị gbasara katidral ndị ọzọ mara mma so na ihe ncheta dị mkpa nke Spain. Ọmụmaatụ, nke Murcia, nke si Salamanca o nke Almudena na Madrid. Agbanyeghị, anyị na-ahọrọ ịkwaga n'ụlọ ndị ọzọ pụrụ iche.
Mosquelọ alakụba Cordoba
Echiche ikuku nke ụlọ alakụba nke Cordoba
Nke a bụ ihe gbasara ụlọ alakụba dị egwu nke Cordoba, nke dị ugbu a Katidral nke Assumption of Our Lady. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku square puku iri abụọ na anọ, ọ bụ nke abụọ kasị ukwuu n'ụwa mgbe Mecca gasịrị.
Ihe owuwu ya malitere na narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ ya na Alhambra, ihe ncheta kachasị mkpa echekwara na ya. nka Andalusian. Agbanyeghị, e megharịrị ya ọtụtụ oge. N'ezie, ụfọdụ ọnụ ụzọ ya, dị ka nke dị n'ime ya Santa Katalina ọ bụ mweghachi. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ndị mejupụtara mpụta nke ụlọ ahụ, nke ụlọ elu mgbịrịgba na mina ochie ochie, mbara ihu ndị dị ka ndị dị n'ebe ndịda facade na patios dị ka nke dị na mbara igwe. osisi oroma.
Nke ikpeazụ sitere na patio ablutions nke ụlọ alakụba ochie ma nwee isi iyi dịka Santa María ma ọ bụ Cinamomo na olulu mmiri dịka Almanzor. Ma n'ime ime, ọ bụ nnọọ ama na ụlọ hypostyle, na ogidi ya na arches. Mana ọ bụkwa ebe ịchụàjà nke Mannerist nke nnukwu ụlọ ụka, otu egwu egwu ma ọ bụ ụlọ ụka dị iche iche. N'ime ha, nke Real, otu nke San Ambrosio, nke Villavicosa ma ọ bụ otu nke anyị nwanyị nke echiche.
Alcázar de Segovia, ebe ewusiri ike n'etiti ihe ncheta dị mkpa nke Spain
Alcazar nke Segovia dị egwu
Nnukwu ụlọ a na narị afọ nke XNUMX bụ nke a kacha eleta na Spain. Ọ gbagoro n'elu ndagwurugwu Eresma ma na-achị obodo Castilian nke akụkọ ihe mere eme. Ndị eze iri abụọ na abụọ na ụfọdụ ndị ọzọ kacha mkpa na akụkọ ntolite agabigala ya. Ọ bụkwa otu n'ime ihe atụ kacha mma nke ebe e wusiri ike ndị agha na narị afọ nke XNUMX n'ụwa.
N'èzí, a na-ekesa Alcázar n'ogige Herrerian nke nwere moat, drawbridge na ebe a na-edebe ya, na-etinye atụmatụ ala ala ya na ụlọ elu anọ. Ma ọbụna ihe dị ịrịba ama bụ Ụlọ elu John II, nke bụ mgbe e mesịrị na Gothic, yana nke a na-akpọ Oghere Moorish, nke na-enye gị ọmarịcha echiche nke Plaza de la Reina Victoria Eugenia.
Banyere ime ụlọ, ebe e wusiri ike nwere ọnụ ụlọ ndị mara mma. nke nke Palacelọ ochie ọ pụtara maka windo ejima ya na bọọdụ ala ya; nke Ebe ekwú ọkụ maka eserese ya na teepu ya; nke Ocheeze maka oche eze ya n'okpuru mkpuchi na nke gallery Ọ na-anata aha a n'ihi elu ụlọ mkpuchi ochie ya n'ụdị akpa akpa ụgbọ mmiri tụgharịrị. Ụlọ eze, ụlọ ụka na ụlọ ndị ọzọ dị ka ụlọ ngwá agha na-emecha n'ime ime Alcázar.
N'ikpeazụ, na otu n'ime akụkụ nke parade n'ala, ị pụrụ ịhụ Ụlọ ihe ngosi nka nke Royal College of Artillery. Na, dị ka akụkọ ifo, anyị ga-agwa gị na ụdị nke ihe owuwu a bụ ihe magburu onwe ya ma na-atụ aro na a na-ekwu na ha jere ozi dị ka ihe nlereanya maka. Walt Disney maka nnukwu ụlọ gị Cinderella. Ọ bụghị ihe ndaba na ọ na-anabata ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ụfọdụ ihe ncheta dị mkpa nke Spain. Ma anyị gaara agwa gị gbasara ọtụtụ ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, ndị na-emeju na Asturian tupu Romanesque, pụrụ iche na mbara ala dum. Ma ọ bụ dịkwa ebube Ụlọ ihe nkiri Rome nke Merida, nke e wuru na narị afọ nke mbụ BC ma ka na-eji eme ihe ngosi. Ma ọ bụ, n'ikpeazụ, ebube Ebe obibi ndị mọnk nke San Lorenzo del Escorial, ọla nke Renaissance nke a na-akpọ ihe ịtụnanya asatọ nke ụwa. Ihe a niile na-echefughị ​​ndị ọzọ dị ka Basilica nke Our Lady of the Pillar na Saragossa, na mgbidi Avila ma ọ bụ ụlọ elu Hercules na La Coruña, nke guzoworo kemgbe puku afọ abụọ. Ị naghị eche na ihe ncheta ndị dị mkpa nke Spain dị ebube?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ncheta ndị dị mkpa nke Spain